BREAKING NEWS : अब देखि बिहे गर्नुभन्दा पहिले तीन महिना तालिम लिनुपर्ने ! | Rochak
BREAKING NEWS : अब देखि बिहे गर्नुभन्दा पहिले तीन महिना तालिम लिनुपर्ने !
April 18, 2021 NepstokLeaveaComment on BREAKING NEWS : अब देखि बिहे गर्नुभन्दा पहिले तीन महिना तालिम लिनुपर्ने !
एजेन्सी । बिहे गर्ने नेपाली परम्परा अनुसार मागी बिबाह, राजी खुसीमा गरिने भागी बिबाह र अदालतमा गरिने काेर्ट म्यारिज हामीले देखिअाएकै चलन हाे । बिहेका लागि केटाकेटीको मन मिल्नु पर्यो । परम्परागत बिहेमा घरपरिवारको पनि स्विकृति अनिवार्य हुन्छ । यसबाहेक बिहेका लागि कुनै परीक्षा नै पास गर्नुपर्ने नियम दुनियामा कतै सुनिएको थिएन ।
तर कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान इण्डोनेसियामा लागू हुने भएको छ । हो, इण्डोनेसियामा बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने नियम सुरु हुँदैछ । ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
ताकि वैवाहिक जीवनका समस्याहरुलाई सहजै हल गर्न सकियोस् र दाम्पत्य जीवनका समस्याकै कारण सम्बन्ध नटुटोस् ।साथै बिहेलाई कसरी सफल बनाउने र बालबच्चा कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा पनि उक्त पाठ्यक्रममा सिकाइनेछ । यो कोर्स ३ महिनाको हुनेछ । यो पढाई पूरा नगरीकन कुनैपनि युवा बिहेका लागि योग्य हुनेछैन । अर्थात् जसले यो पाठ्यक्रमको पढाई पास गर्नेछ, उसले मात्र बिहे गर्न पाउनेछ ।***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
गलत उपचारले एक चर्चित नायीकाको भयो यस्तो हालत, सम्पर्क गर्न खोज्दा डाक्टरले फोन अफ गर्दिए???
“अचम्मको घटना “अन्तिम संस्कार गरेको ९ दिनमा जिउदै बाबु घरमा आएपछि भुत भन्दै भागे छोरा”
हिन्दु धर्ममा यत्तिकै पवित्र मानिएन गाईको गहुँत, यि १४८ रोगहरूको औषधी भएको बैज्ञानिकको ठहर